Ukuqeqesha nge-Coronavirus e-Howard College.
IKolishi Lezifundo Zezempilo Liqeqesha Abasebenzi Bezempilo Nge-COVID-19
Ngaphansi kukaSolwazi uMosa Moshabela, iDini yeSikole sezobuHlengikazi nezeMpilo YoMphakathi, iKolishi Lezifundo Zezempilo e-UKZN liqale uhlelo olubanzi eNyuvesi yonke lokuqeqesha ngokubheduka kwe-Coronavirus eNingizimu Afrika.
Abasebenzi okubalwa kubona nabahlengikazi, abasebenzi bezempilo, abagqugquzeli bezempilo, abeluleki ngegciwane lesandulelangculazi, abasebenzi basemahhovisi emitholampilo yaseNyuvesi, nabahlengikazi bezokukhubazeka basemakhempasini womahlanu aseNyuvesi bebesemhlanganweni wokucobelana ngolwazi ukuze baqhamuke namaqhinga amasha okubhekana ne-Coronavirus. Umhleli walo mhlangano, uDkt Velile Ngidi, uthe ithimba lihlela ukusiza abasebenzi bezempilo ukuthi baqhamuke nezindlela eziphusile.
UDkt Richard Lessells uthe lo mhlangano uhlose ukuqhamuka namasu okubona igciwane ngaphandle kokulifafaza. Ubalule ukuthi bonke akade bekhona kusona bayazi ukuthi imitholampilo yabo isebenza kanjani, ngakho ‘kudingeka nisisize ukuze sikwazi ukunisiza’.
Echaza ukuthelelana kwegciwane kubasebenzi bezempilo eNyuvesi, uDkt Lilishia Gounder uthe inamathela ezinyameni ezithambile ezisemgudwini wokuphefumula bese idala igciwane elisa-pneumonia. Wengeze ngokuthi abantu abadala nalabo abanezifo ezingumahlalakhona yibona abasengcupheni enkulu. Kuvunyelwane ngohlu lokubheka nokusebenzisa i-N95 nezifonyo nokuthuthwa kwabafundi abakhombisa izimpawu.
Abasebenzi bezempilo babongile ngaloku kuqeqeshwa, banxusa ukuthi kube khona okunye okuhlelwayo ukuze kuqhanyukwe nezinye izinhlelo zokuqeqesha abasebenzi baseNyuvesi uma kubheduka.
Umhlangano wabasebenzi bezempilo wokucobelana ngolwazi ulandelwe ukuqeqesha kabili esibhedlela i-Grey’s eMgungundlovu ukuhlomisa odokotela nabafundi ngokuthi bakwazi ukubhekana ne-Coronavirus ezibhedlela ezehlukene abasebenza kuzona. BUKA - I-UKZN Iqeqesha nge-COVID-19.
Isifundiswa sezesiNtu Siqokelwe Ukuba NguMengameli we-English Academy of Southern Africa
Kukhuthazwe Ukusetshenziswa Kwezilimi zase-Afrika Ukufunda Nokufundisa Izilimi Zomdabu Zase-Afrika
Amfundi we-PhD Kwezobuchwepheshe Zobuciko Embukisweni Uxhaswe yi-UN